PressReader - Ilanga: 2017-10-02 - Kuyadabukisa okubonakala kwenzeka kuKhongolose
Kuyadabukisa okubonakala kwenzeka kuKhongolose
Ilanga - 2017-10-02 - Imib -
OKWENZEKE engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-African National Congress (ANC) e-Eastern Cape, kwenze sabona ukuthi kakusekude ukuba leli qembu ebelihlonishwa cishe uMhlaba wonke liphenduke isiqiwu lapho izi-lwane zingakwazi ukulawula ogovane bazo beseziqho-bozana nje kungabi ndaba zalutho.
Ezinye izithunywa zaleli qembu ebezikule ngqugquthela ebiseBhisho (East London), zigoduke ziyizingozingozi, zibhandishiwe ngenxa yokulwa, kujikije-lwana ngezihlalo ngoba kunokungazwani kahle ma-yela nezithunywa obekuthiwa zingene ngopotsho.
Lokhu kwenza sisole ukuthi empeleni abantu kabasajoyini amaqembu ezepolitiki - kakhulukazi yona i-ANC ngoba isemandleni - ngoba befuna ukuthuthukisa amaqembu nokusiza abantu. Indlela aba-ntu asebeziphatha ngayo kwi-ANC, yenza kubukeke sengathi baqhutshwa yindlala.
Yini le engaka edala ukuba abantu baze babulalane bashayane uma kuwukuthi kukhona abangagculisekile ngakho?
Kuyadabukisa nje ngoba konke okwenzekayo, kakupheleli nje kwa-ANC, kuchaphazela nezwe kwazise phela leli qembu yilona elibambe amatomu ombuso.
I-ANC ibukeka izofana ncimishi neSafa KZN ABC Motsepe League - ingakaxhawa nguMnu Patrice Motsepe - lapho bekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuthi njalo uma kuphela isizini amaqembu ahlulwe wukudlala ibhola enkundleni agijimele etafuleni eyofaka amacala. Amalunga e-ANC e-Eastern Cape angagculisekile ngemiphumela evune uMnu Oscar Mabuyane - ohlule uMnu Phumulo Masualle kwesikasihlalo - kawapholisanga maseko avele anikela enkantolo ephonsela inselelo imiphumela.
Sibona kuzoba nzima ebuholini bukazwelonke baleli qembu emuva kwengqungquthela yalo yangoZibandlela (December) lapho kuzobe kukhethwa khona ubuholi ngoba kuzofanele buzame ukuhlanganisa leli qembu osekuyimpumputhe kuphela engaboni ukuthi seliyinhlakanhlaka kuhle kwamasimba omthini. Okubuhlungu nakakhulu wukuthi lezi zithunywa ebezise-Eastern Cape, zigqemane izingozi kukhona nabaholi be-ANC kuzwelonke, okubalwa kubona uMnu Bheki Cele.
Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi lo moya wolaka nokungabekezelelani emalungeni allei qembu, wenza aphenduke izimpumputhe angabe esahlonipha nabaholi bawo.
Kuzomele ubuholi baleli qembu busheshe busukume ngoba bazophela abantu. Kakusikhona okwethu ukuthi i-ANC yenzani emicimbini yayo kodwa okusikhathazayo - njengoba sike sasho naphambilini - wukuthi leli qembu lilandelwa ngabantu abaningi futhi yilona eliphethe uhulumeni, ngakho-ke ukuxokozela kwalo kungaphanzamisa izinhlelo zikahulumeni, abantu babhuqwe yindlala nezifo.
Okunye okwenza sishaywe wuvalo, lezi zenzo zeANC zizoholela ekutheni igcine ilahlekelwe ngamalunga, okuyoba nzima kuyona ukwamukela ukuthi izwe seliphethwe ngelinye iqembu ngelinye ilanga. Kasisho ukuthi uvalo lwethu luthi kumele i-ANC ihlale emandleni kuze kubuye uJesu, cha.
Okusikhathazayo yindlela amalunga ayo aziphatha ngayo, uma ekwazi ukushayana wodwa abulalane wodwa, sibona ukuthi mhla kungenzeka kuthiwa uhulumeni uwela kwelinye iqembu, kungasuka impi.
Sikusho lokhu ngoba sekucace bha kuhle kwekati elimhlophe ehlungwini ukuthi kuleli qembu kunabantu abangazwani nokwehlulwa - benza noma yini ukuze bathole izikhundla abazifunayo.
Siyaphinda siyanxusa, le mikhuba mayinqandwe ngoba izodweba isithombe esibi ngezwe lethu elivele lingaselihle kubatshalimali.